Ny fahavoazan'ny formaldehyde be loatra amin'ny tsihy fiara
Ny fahavoazan'ny formaldehyde be loatra amin'ny tsihy fiara Data avy amin'ny National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) dia mampiseho fa matetika ny lozam-pifamoivoizana ateraky ny matin'ny fiara. Azo eritreretina fa ny matotra fiara kely koa dia mety ...
Amin'ny vanim-potoana taorian'ny valan'aretina, mifantoha amin'ny fironana vaovao amin'ny tsihy fiara.
Tamin'ny vanim-potoana taorian'ny valan'aretina, mifantoha amin'ny fironana vaovao amin'ny tsihy fiara Ny fiparitahan'ny COVID-19 tamin'ny taona 2020 dia nanery ny tanàna hanery ny bokotra fiatoana. Taorian'ny fiainana an-trano lava sy vaovao tsy tambo isaina momba ny ady amin'ny valan'aretina, manana eritreritra vaovao ny tsirairay ...
Debut DEAO amin'ny Automekanika Shanghai faha-16
Ny orinasanay dia mitazona ny 16th Automekanika Shanghai ao amin'ny National Exhibition and Convention Center (Shanghai) manomboka ny 02 hatramin'ny 05 desambra 2020 Misaotra betsaka anao noho ny fanohananao hatrany ny orinasanay, amin'ity fotoana ity, Changzhou Deao Vehicle Technology Co., Ltd. wou ...
Fa maninona no manantitrantitra manao tsihy fiara TPE vita amin'ny tsindrona iray?
Nantsoina hoe ozin'izao tontolo izao foana i Shina. Miaraka amin'ny fanatsarana ny tanjaka ara-toekarena feno an'i Shina, ny fahafahan'ny tsena goavambe dia nahatonga ny tsena sinoa tsy maintsy jerena amin'ny marika iraisam-pirenena. Nihazakazaka ny orinasa iraisam-pirenena sy ny marika iraisam-pirenena ...
Inona ny fitaovana TPE?
Ankehitriny ny vokatra TPE dia be mpampiasa amin'ny asa ataontsika andavan'andro, azo jerena ihany koa fa ny vokatra TPE dia nanjary nilaina tsikelikely tamin'ny fiainantsika, koa inona ireo akora manta? Ahoana no amangaroana ny TPE? Avy amin'izany ny mahatakatra: ...